Streletsky द्वीप, Střelecký अस्ट्रो - प्राग
ठेगाना: 110 00 प्राग 1, चेक रिपब्लिक
प्राग मा Streletsky आइल्याण्ड Vltava, शहर को मुख्य नदी को बीच मा एक छोटा सा आइलेट छ। यो शहरको बीचमा स्थित छ, तर सबैभन्दा लोकप्रिय पैदल यात्राका ट्रेलहरूबाट टाढाको टाढा छ। यहाँ तपाईं मात्र हेराइहरू मात्र हेर्न सक्नुहुनेछ तर मौन पनि।
प्राग मा Streletsky द्वीप Vltava नदी को दुई किनारों को बीच एक प्राकृतिक गठन हो। यसको क्षेत्र धेरै सानो छ - केवल 2.5 हेक्टेयर। अक्सर द्वीप को आकार धाराहरु द्वारा परिमार्जन गरिन्छ। यसबाहेक, टापु, इलाका, अक्सर बाढीबाट ग्रस्त हुन्छ। अन्तिम पटक यो जून 2013 मा पूर्णतया बाधा भयो।
एक पल्ट जब Strelets द्वीप को लिटिल वेनिस भनिन्छ, किनकी एक पल्ट एक छोटा Vltava च्यानल द्वीप को माध्यम ले भाग्यो।
किन यो Streletsky द्वीप भ्रमणको लायक छ?
यो त्यस्तो विशाखिक आकर्षण वा ठाँउ होइन कि यो सूचीको सूचीमा राख्न को लागी छैन। प्राग मा Streletsky द्वीप एक शोर शहर को बीच बस एक आरामदायक कोने है, और केवल उन जो वास्तव में चुप प्यार, एकांत और प्रकृति इसे की सराहना करेंगे।
द्वीप को सम्पूर्ण क्षेत्र एक ठूलो पार्क हो: सुन्दर alleys, आरामदायक बेंच। उल्लेखनीय छ, साल को कुनै पनि समयमा स्ट्रिलेटकी आइल्याण्ड सुन्दर छ, तर शरद ऋतुमा यसको उज्यालो रंग सजिलै संग छ।
यहाँ कुनै ठूलो भवनहरू छैनन्, केवल रेस्टुरेन्ट "Streletsky आइलैंड" मात्र, समुद्र तटमा समुद्र तटमा स्थित छ। यसले राष्ट्रिय थियेटरको निर्माणको सुन्दर दृश्य प्रदान गर्दछ।
गर्मीमा त्यहाँ टापुमा खुल्ला वायु सिनेमा छ, साथै विभिन्न संगीतकारहरू पनि छन्। मई मा, वे परंपरागत रूप से एक छात्र कार्निवल त्योहार होस्ट - मेयोलिइस।
स्ट्रेलेट आइल्याण्ड भन्दा माथि लिगिया ब्रिज हो, जसबाट यसले कदमहरू अगाडि बढाउँछ। यसले अक्षम व्यक्तिहरूको लागि यो पहुँचयोग्य बनाउँदछ, तर प्राग प्राधिकरणले यो काम गरिरहेका छन्, लिफ्ट बनाउनको लागि
अनगिन्त संग्रहालय (प्राग)
केक क्रस्टहरू - एक त्यस्ता उत्सवको लागि एक साधारण नुस्खा एक उत्सव मिठाईको लागि
एक हप्ताको लागि विद्यालयमा स्कोर कसरी तय गर्ने?
ओर्थोडक्समा मानव आत्मा के हो र वैज्ञानिक दृष्टिकोणबाट के हो?
म क्यान्सरहरू कसरी बाँड्न सक्छु?
कजाखस्तान मा दूतावास को ग्रेनाडा
मैनीक्योर 2015 मा नयाँ
सबै भन्दा कामुक आत्माहरू
थर्मो अंडरवियर थर्मोform
पाक सर्वोत्तम विक्रेता जेमी ओलिभरले तपाईंलाई कसरी स्वस्थ खाना तयार पार्छ भनेर सिकाउनेछ
एक चुरोट कसरी चिन्न सकिन्छ?
हैरी शैली र टेलर स्विफ्ट
मकवानपुरमा केफिरमा कपकोक
किम कार्दाशियन शैली को विकास को 15 लक्षण
महिलाहरु मा चेलिदिया trachomatis
ओलिभिया म्यानले फुटबल खेलाडीलाई विवाह गर्दछ
चावल किन उपयोगी छ?
टर्की स्तन - क्यालोरी सामग्री
कर्करहरूको लागि साइटहरू
ब्लेक लिफ्ट गोद लेने को बारे मा सोच रहे हो?